Ethiopia oo sii Deysay Hoggaamiye Mucaarad ah iyo Rabshadaha ka socda | Kalshaale
Ethiopia oo sii Deysay Hoggaamiye Mucaarad ah iyo Rabshadaha ka socda
Feb 14, 2018 - 13 Aragtiyood
Nairobi (Kalshaale) Dowladda Ethiopia ayaa shalay xabsiga ka sii deysay Bekele Gebre oo ah hoggaamiye sare oo mucaarad ah, sidoo kalena laashay dhammaan eedihii loo haystay.
Bekele Gebra oo ah xoghayaha guud ee ururka Oromoda OFC, ayaa dowladdu ay xabsiga dhigtay bishii Dec 2015-kii, kadib markii ay qarxeen dibaxbaxyo ka dhacay gobolka Oromada.
Wuxuu yiri “Waxaa naloo soodaayay sababo ay ugu wacan tahay cadaadiska dadka ka imanaya oo sii kordhaya. Taasi ayaana ugu weyn in nala soo daawo. Dowladdu ma doonayso inay na dhageysato oo badanaa ma rumaysna halganka nabadda ah, waayo iyadu waxay xukunka ku timid halgan hubeysan kaas oo kaliya ayayna taqaanaa. Waligeed ma aqbalin halgan nabadgelyo ah”
Dhinaca kale, waxaa socda cafis guud oo dowladdu ay u fidisay dadka ka soo horjeeda, iyadoo talaabdaasina uga gol leh inay ku yareyso xiisadda dalkaasi ka jirtay tan iyo 2015-kii
Akhyaarta ra'yigiina halkan ku qora (13)
Iska ilaaliya nin laga soo daayey Xabsi Xabasho Aamin maleh.
-‘ Hadey Itoobiya burburto waxaa si sahlan ku xoroobaa Soomaaligalbeed, sidii ka dhacdey iney Russian ka xoroobaan wadamo Muslimiin ah oo kabadan ilaa 7 dal markuu burburey Soofiyeedkii.
-Kacdoonka Oromada waa faa’iidada Soomaalida.
Isbedel waa dhici karaa laakiin Ethiopia ma burburayso. Xukunka waxaa ku loo la maya saddex qoomiyadood: Oromiya, Amhara, iyo Tigreya. Ethiopia ma kala googo’ayso mana burburayso. Waa suurtagal haddii isbedel dhacayo in rabshado dhacaan, dadna dhinto. Sababta aan taas u leeyahay waa, saddexda qoomiyadood mid waliba waxay rabtaa Ethiopia oo dhan oo mida inay xukunto. Mid fowdo, burbur, aargoosi, iyo bililiqo oggolaanaysana ma jirto…markaa saddexdaas qoomiyadood siyaasaddooda la fiiriyo in Ethiopia Federal noqoto waxaa ugu dhoow qoowmiyadda Tigreeda ee hadda talada haysa, kuwa kale Federal xitaa ma oggola….waxaa tiro ahaan ugu yar oo inoogu fog deegaan ahaan waa Tigreega….kuwa kale Soomaalida deegaan bay ba isku soo gaaraan…..suaashu waxaa weeye Soomaaliweyn saddexdaa qoowmiyadood, tee bay dan siyaasadeed ugu jirtaa inay xukunka Ethiopia qabsato..wakhtigan…
Xukun Minority ma waaro inuu Dictator jiro maahane, waxaan ku soo aragney
Ciraaq ( Sunni minority)
Suuriya hadda (Shiica Minority)
Soomaaliya waan ka reebay si aysan doodu nooga xumaan.
Sidaas daraadeed hadaan ka xoroobeyno Itoobiya waxaa noo fiican inaan ama wada hadal uga xorowno Majority ama dagaal.
Go’aan minority ku noqoshaa u dambeyn.
Inkastoo qoraalkaada uusan ka muuqan xornimo, ee aad xiiseynayso inaan hoos joogno Itoobiya with ( New colony system ). FEDERAAL AFKAA.
Ka nax ama ku farax – waxaa dhicikarta inay burburto Ethopiya.Magaca Iyo maamulka Ethopiyaba wuxuu jiraa 100 sano.Oromo ma rabto inay qayb ka noqoto wax la yidhaa Ethopiya – mana aaminsana inuu jiro wadan la yidhaa Etopiya.Waxay aaminsanyihiin inuu yahay magac fake ah oo loo samaystay in lagu dulmo ummadaha dhulkaasi deganaa.
Ethopiya adiga ayaa aaminsan oo u Jaajuusa hadaad tahay Somaliga doqonka ah ee iska socda sida xiilaha/
Oromo ma aaminsana wax la yidhaa Ethopiya oo ah wadan.Waxay aaminsanyihiin inuu Tegreegu ku noqdo dhulkiisa.Wayana ayay uGu yeedhaan.
In la qabsaday ayay aaminsanyihiin oo loo samaystay magacan la yidhaa Ethopiya.Maaha dad iska socda e waa dad garanaya waxa kira.
Doqontii ciddiyaha ruuJimadaa ee dhaadheer la baxday, ee lagala noogay iska jar ama hallagaa jaro, ee hadana lagala noogay inay iska nadiifiso, kadibna iyagoo ruujimaa labadii indhood isaga ridday, waxay jaclaysatay xaasidnimo daraadeed in sideeda saaxiibadeed noqdaan, oo intay ciddiyo la baxaan kadibna indhaha isaga ridaan, sideeda oo kale. Saas waxaa ka dhigan Soomaalidan inta waddankoodii fiiqday oo burburiyey, dadkoodii isku laayey oo kala dilay, markay burbureen, tabaryareeyeen, isnaceen, cayroobeen, sumcad xumaadeen, habaarka iyo xaasidnimadu ka soo hartay, oo sidii doqontaas wixii ay xumaan dadkooda iyo dalkooda ku faleen la jecel inay dalalka la deriskaa isku falaan. Micnuhu waa saan isu burburiyey, isu dilay, isu nacay, u tabaryareeyey, ila noqo oo sidaan u dhaqmay oo cawaanimada ahayd u dhaqan aad sidayda u ekaatide….oo yaa kaa yeelaya…oo kaa caqli liita…casrigan dadkii waxbartay..oo La fahmay dibudhaca ka imaanaya burburka iyo dagaalada sokeeye…tijaabadaa aynagay inagu dhacday waxna la inaga bartay..aynaga maaha inaan xalka ka raadino, tabarna ka raadino xaasidnimo iyo dhibkaan isu geysanay oo kale inuu deriskeena ku dhaco….taasi xal keeni mayso….waa inaan khaladkeenii wax ka baranaa, isbedel samaynaa, deriskeenana nabad iyo wanaag la jeclaanaa…
Micnuhu maahan sidaas-
ee waxaa waaye sideen uga xoroobikarnaa AXMAARO IYO TIGREE.
Inaba kuma farxeen iney burburaan hadeyna Axmaaro iyo kuukuuyo haysan dhul soomaaliyeed..
Su’aashu waxaa waaye – dalka Azerbaijan ama Turkistan Islamic republic maxey faa”iido ugu jirtey inuu burburo MIDOWGII SOOFIYEED oo keentay meesha ay hadda joogaan (muslim xor ah) mise iney hoos joogaan SHUUCIGII CAABUDIJIREY BURISYADA GUDUUDAN/CASAANKAA.
xaqiiq waaye inaan ka naxeyn burburka YUHUUDA hadey Falastiin xoroobeyso, xaqiiq waaye inaan ka naxeyn burburka INDIA hadey xoroobahayaan KAASHMIIR.
– Nabi Muuse CS ayaa habaarey doqonta markuu damcey inuu ka dejiyo qoryihii saarnaa ee ay moodey iney dan ugu jirto RARKA QORYAHA.
–sheyga aduunka ugu qaalisan waa xornimada – taas ayaa igu kaliftey inaan soomo hadaana ka xoroobikarin human sideyda oo kalaa (Mahatma Gandhi of India )
Aqristow wadamadaan soo socdo waa wadamo muslimiin ah oo maanta ka soo qeybgalo shirarka wadamada muslimka, dalaka Europeankuna u heystaan dalal ay gumeysan jireen oo gacantooda ka xoroobey.
– adoo muslim ah miyaad ku farxilaheyd iney hoos joogaan MIDOWGII SOOFIYEED ee ay ku hoos noolaanjireen…
Iyo Kosovo oo ay aqoonsadeen 100 dal oo ka mid ah 192’da dal ee iska xaadiriya UN’KA aka qurunka midoobay. Adigoo muslim ah waxaad uga naxdaa gaal ku gumeysta burburkiisa waa dabadhilifnimo, doqonimo iyo waliba munaafaqnimo!
Aabahaa oo caasi ku ah awoowgaa maxaa ku dhihilaheyd?
Waa faa’iido weyn oo usoo hoyatay muslimiinta qasatan ilmo TAN.
itoobiya ha layso oromada dalkana ha ku xukunto xukun milatariy oo micnaheedu yahay nagahaya oromiya oo yaanay galkaa noosoo dhaafin oromo yaa dhul iyo dhaqale u hayaa waar nimanku yay noo soo dhaafin jigjiga wbt
Maamul daalin ah oo qabsaday xor ah – umado xor ah inuu maalin tagidoono waa la hubaa.Inuu burburana waa lama huraan.
Wax kasta oo daalin ahna muddo ayuu sii shaqaynkaraa.
Maamulka Ethopiya waa maamul
Anniga waxaan ku fikir ahay in eey Ethopia burburin Dusha. Waxaa dhici karta, Ilaaheey ayaa wax kasta og’e, in aan Ethopia in eeysan burburin aan iskugu raacsanahay kala ujeedo.
Laakiin, teeyda hadaan ka hadla, Ethopia oo burburta Somaliya oo la daris ah, saameeyn ayeey ku yeelan, amaba dadkaas naga tirada badan haskusoo jabaan dalkeena, innaga oo aanan laheyen dowlad xoogan, oo xakameeyn karrin xaduudaheeda, iyo waxa soo gala iyo waxa ka baxa.
Argagixisda alshabaab, oo si burcadnimo ah ugu sii faafta geeska Afrika, siina hesha taageeoro iyo nidaam fowda ah.
Dooda ah Ethopia ayaa dhul naga heeysata, iyo kenya ayaa dhul naga heeysata waxeey ila tahay in dib loogu noqda, oo eeysan caga badan ku taagneeyn.
Dhulka lagaa heeysta inta iska deeyso, kii aad heeysatay ee proper Somaliya, Koonfur iyo Waqooyi xaaladooda waa sidee?
Arrinka maahan in si madax adeeygnimo ah, loogu celceliyo wax aanan “logic” aheeyn, amaba caqliga diidaya. Bal fakira, oo is weeydiiya?
Aabaheey oo askari ah, ayaa ka dagaalamay Ethopia dhexdeeda dagaalkii 1977. Somaliya iyo Ethopiana maahan sidii eey ahaayeen 1977.
Maahan, qofka bani’aadamka ah qaasatan Afrikaanta, waliba si qaasatan dadka Somaliyeed, in eey cadow sameeysasho, iyo dagaal dhexdooda amaba dal kale eey maalin walba shaqo ka dhigteen.
Caqli xumada iyo daanyeernimada Somalida inta la’arkay ayaa waxaa hadda socda, in askar u dagaalanto oo calooshaad u shaqeeystayaal ah eey ka dhigtaan carabta wadamadooda dagaaladda kasocdaan sida Yemen, iyo kuwa eey dagaalada kusoo socdaan sida Qatar iyo Imaaraada. Horay ayeeyba burcad calooshood u shaqeeystayaal camal ah uga dalaamayeen Somalida Afganistaan.
Qofka Somaliga inta uu dhiman karay waa uu soo dhintay. Looma baahna dagaal maalaayacni ah, iyo maalin walba qar iska xoor. Aayar aan danteena u garano.